Madaxweyne Siilaanyo Oo Kulan Xogwaraysi Ah Kula yeeshay Madaxtooyada Dallada Urarada Aan Dawliga Ahayn | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Kulan Xogwaraysi Ah Kula yeeshay Madaxtooyada Dallada Urarada Aan Dawliga Ahayn
Hargeysa(ANN) Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa kulan xogwaraysi ah kula yeeshay xubno ka socday dallada Ururada aan dawliga ahayn ee loosoo gaabiyo (SONSAF). Sidaana waxa lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska madaxtooyada kulankaa kadib, kaas
oo u qornaa sidan:-
“ Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamauud (Siilaanyo) waxa uu maanta Qasriga Madaxtooyada kulan is-xogwaraysi ah kula yeeshay Ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland Non State Actors Forum (SONSAF).
Ugu horayna Gudoomiyaha SONSAF Mr. Aadan Xaaji Cali Axmed oo kulankaasi ka hadlay ayaa Madaxweynaha uga waramay waxqabadka iyo ujeedada ururkan loo aasaasay.
Waxa kale oo ay SONSAf balanqaadeen inay la yeeshaan wada shaqayn xukuumada oo ay ku taageeri doonaan waxqabadka ay u hayso bulshada, maadaama ay metelaan dhamaan qaybaha kala duwan sida Madax-dhaqameedyada, Culimo-awdiinka, xirfadlayaasha (sida Jaamacadaha, Ururada Dhakhaatiirta, Ururada Saxaafada, Ururada Qareenada), ganacsatada, iyo ururada bulshada Rayidka ah.
Waxa kale oo ay SONSAF u gudbiyeen Madaxweynaha nuqul ah xeerka ururka sonsaf, warbixin ku saabsan daraasad laga sameeyay doorashooyinkii dalka ka dhacay 10-kii sano ee u dambeeyay iyo warbixin ku saabsan kormeerayaashii maxaliga ahaa ee ilaalinayay doorashooyinkii Madaxtooyada ee 2010-kii.
Madaxweynuhu waxa uu dhinaciisa u sheegay inay ururada bulshadu door muhiim ku leeyihiin waxqabadka iyo horumarka dalka, isaga oo ku dhiiri-geliyay inay mar walba ilaaliyaan Qaranka Jamhuuriyada Somaliland maadaama ay tahay Arin Qaranku ku heshiiyey oo lamataabtaan ah cadaw fara badan oo lidi ku ah jiritaanka Somaliland-na uu jiro.
Waxa kale oo Madaxweynuhu soo dhaweeyay ururka SONSAF una balanqaaday inay wada shaqayn joogto ah la yeelan doonaan, wixii taageero ahna siin doonaan ka xukuumad ahaan.” Ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay kulanka madaxweynaha iyo dalada jilayaasha aan dawliga ahayn oo ah dalada ururada bulshada Somaliland.